मध्य पहाडी लोकमार्गको रिघा भुसुनी डाडाँमा चिप्लिएर ट्याक्सी दुघर्टना ! – ebaglung.com
मध्य पहाडी लोकमार्गको रिघा भुसुनी डाडाँमा चिप्लिएर ट्याक्सी दुघर्टना !
२०७४ श्रावण १७, मंगलवार १९:०८	Top News, थप समाचार
गुमानसिँह भण्डारी, गल्कोट (बागलुङ) २०७४ साउन १७ । मध्यपहाडी लोकमार्गको हटिया-खर्वाङ खण्डको रिघामा ट्याक्सी दुघर्टना भएको छ । गलकोट नगरपालिका वाड नम्बर ११ रिघा भुसुनि डाडाँमा उकालो चढ्ने क्रममा बलौटे माटो चिप्लिएर करिब १ सय मिटर तल खसेको स्थानिय दिवान काउचा घर्तिले बताए ।
हटिया देखि रिघा तर्फ जादै गरेको ध १ प ६५७ नम्बरको ट्याक्सी दुर्घटना भएको ईलाका प्रहरी कार्यालय हरिचौरका प्रमुख अर्जुनध्वज अधिकारीले बताए । ट्याक्सीमा चालक थम्मन परियार मात्र सवार भएका कारण सामान्य घाईते भएको बताईएको छ ।
उनलाई उपचारका लागी हटिया ल्याउदै गरेको समाचार प्राप्त भएको छ ।
पहिले रिघा भुसुनीमा पहिरो जाँदा ट्याक्सी बगाएको स्थानीयले जानकारी दिएका थिए । रिघाको मनेवा पाटा लगायत सडकका विभिन्न भागमा पहिरो गैरहदा सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ । सडक स्तरोन्नती र दरम खोलामा निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाको कार्यले रिघा खण्डको सडक निकै कमजोर भएको स्थानीयको भनाई रहेको छ ।
क्यान्सर रोगी भुजेलको रोदन, म बाँच्न चहान्छु (भिडियाे सहित)
कार्यालय सहायकको बदमासी भेट्टिए पछी जेटिएको परीक्षा स्थगित !